Sida loogu rakibo PHP server kasta (Linux, macOS, Windows) | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida loogu rakibo PHP server kasta (Linux, macOS, Windows)
Sida loogu rakibo PHP server kasta (Linux, macOS, Windows)
Dejinta server-ku waxay noqon kartaa hawl adag, gaar ahaan marka la rakibayo luqadaha sida PHP. Haddii aad rabto in aad kor u qaaddo oo socodsiiso server-ka tijaabada WordPress, waa xirfad lagama maarmaan ah in la barto.
Miyaadan wax fikrad ah ka helin meesha laga bilaabo inaad PHP ka hesho server-kaaga? Iyadoo ku xiran habayntaada gaarka ah, waxaa jira siyaabo badan oo loo sameeyo. Halkee ka soo dejisan kartaa PHP, noocee ah, maxaad u baahan tahay si aad u shaqeyso, sideese ugu rakibtaa PHP OS-yada kala duwan?
Waxaan dhamaantood uga jawaabi doonaa hagaha rakibaadda hal-joojinta ee PHP.
Fiiri hagahayaga fiidiyowga si loo rakibo PHP
PHP waa luuqad qoraal ah oo il furan oo inta badan loo isticmaalo horumarinta webka iyo qoraalka dhinaca server-ka (backend). Erayada fudud:
PHP waxa lagu rakibi karaa server-ka si loo socodsiiyo qoraallada (tusaale qaybo kood ah oo foomamka lagu daro goobtaada).
Waxa loo maamulaa dhinaca server-ka halkii ay ka ahaan lahayd dhinaca macmiilka, sidaa awgeed waxa ay ka shaqeysaa dhinaca dambe ee browserka.
Waxay si fiican ula midowdaa HTML, taasoo ka dhigaysa mid aad ugu habboon horumarinta shabakadda.
Sidoo kale waa mid ka mid ah luqadaha ugu fudud ee wax lagu qoro mareegta in la barto, taasoo ka dhigaysa doorasho caan ah kuwa bilowga ah. Laakiin sidoo kale aad bay u awood badan tahay oo ku habboon shaqooyinka mareegaha sare.
Shabakado badan iyo qalab ayaa isticmaala PHP iyo kordhinteeda badan (.NET, Apache, iyo MySQL waxay u muuqan karaan kuwo la yaqaan). WordPress wuxuu ugu horrayn ku dhisan yahay PHP, inta badan plugins-keeda iyo mawduucyadeeda ayaa sidoo kale ku shaqeeya.
Adeegahaagu ma u baahan yahay PHP?
Markaa waad ogtahay waxa PHP uu yahay, laakiin maxaad ugu rakibtay server-kaaga?
Sababta ugu caansan ayaa ah in ay tahay shuruud ah in WordPress uu kor u kaco oo uu shaqeeyo, maadaama ay ku dhisan tahay ku dhawaad ​​PHP. PHP waxa kale oo uu awood u leeyahay badi hawlaha WordPress, qabsatooyinka, mawduucyada, iyo plugins.
Waxaad ku arki kartaa dhammaan shuruudaha nidaamka WordPress ee kale halkan:
Markaa, haddii aad rabto inaad ku socodsiiso server-ka tijaabada WordPress si aad ula ciyaarto ama u dejiso goob wax lagu diyaariyo, waxaad u baahan doontaa inaad rakibto PHP.
Taas ka sokow, PHP waa bar bilow fiican u ah devs bilowga ah. Way fududahay in la isticmaalo marka la barbar dhigo luqadaha kale ee qoraalka webka, laakiin taasi kuma imanayso kharash kasta oo shaqayneed. Waxaad ku samayn kartaa nooc kasta oo shay ah haddii aad tahay qof xirfad ku filan.
PHP sidoo kale waa caan. Sidaa darteed, waxaad ka heli kartaa balaadhin iyo ilo badan oo online ah.
Taas ka sokow, haddii aad rabto inaad barato sida loo codeeyo mawduucyada WordPress iyo plugins, waxaad u baahan doontaa inaad barato PHP. Dejinta server-ka imtixaanku waa hab fiican oo lagu tijaabiyo.
Ogsoonow in badan oo server-yada martigeliyaha ah (sida Behmaster) la imaada horay loogu rakibay PHP iyo WordPress. Behmaster xitaa waxaa ka mid ah awoodda lagu abuurayo goobta diyaarinta WordPress, markaa taasi way fududahay in la helo sidoo kale.
Sababta kaliya ee aad ugu baahan tahay inaad tan gacanta ku samayso waa haddii aad ka soo dejisanayso server meel eber ah, mid ka mid ah kombayutarka degaankaaga ama jawiga martigelinta ee aan la maamulin.
Taasi waxay tidhi, aynu galno tilmaamaha dejinta server-ka.
Kahor intaadan rakibin PHP, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in server-kaagu uu xamili karo. Nasiib wanaag, shuruudaha ayaa si cadaalad ah aasaas u ah, iyo in badan oo ka mid ah software-ka ay u badan tahay in mar hore lagu rakibay kombiyuutarkaaga.
Haddi aanad waligaa u samaysan seerfar, waa in aad eegtaa hagahan si aad u samaysato server maxali ah oo OS ah oo badan. Waxyaabaha gaarka ah way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran nidaamkaaga hawlgalka, laakiin waa inaad taqaan sida loogu shaqeeyo khadka taliska oo aad diyaar u tahay inaad rakibto software cusub.
Nidaam kasta oo qalliin oo aad ku rakibayso PHP, waxaad u baahan doontaa server-ka shabakadda si aad u socodsiiso. Waxaad sidoo kale u badan tahay inaad u baahato inaad ku rakibto xog-ururin sida MySQL, markaa taas maskaxda ku hay.
Waa kuwan shuruudaha PHP ee OS kasta, laga bilaabo Linux:
Isku-duwaha ANSI C.
Qaybaha u gaarka ah moduleka sida maktabadaha sawirada GD ama maktabadaha PDF.
Ikhtiyaar: Autoconf 2.59+ (oo loogu talagalay noocyada PHP <7.0), Autoconf 2.64+ (nooca PHP> 7.2), Automake 1.4+, Libtool 1.4+, re2c 0.13.4+, iyo Bison.
Waa inaad sidoo kale aqoon u yeelataa socodka OS-yada u eg Unix.
Hadda shuruudaha PHP ee Windows:
Windows OS-yo badan ayaa lagu taageeraa PHP 5.5+, laakiin isticmaalayaasha 7.2.0+ ma isticmaali karaan Windows 2008 ama Windows Vista.
Visual Studio 2012, 2015, 2017, ama Microsoft Visual C++ Dib loo qaybin karo Visual Studio 2019, iyadoo ku xidhan nooca PHP.
Ugu dambeyntiina, ma jiraan wax shuruudo ah oo loogu talagalay macOS sababtoo ah PHP wuxuu ku xiran yahay nidaamka. Hoos waxaan ku sharixi doonaa sida loo awoodsiiyo.
Halka laga soo dejiyo PHP
Haddii aad u baahan tahay inaad gacanta ku soo dejiso faylasha PHP, waa inaad ka heshaa bogga rasmiga ah ee PHP downloads bogga.
Iska ilaali inaad ku rakibto boggaga qolo saddexaad ilaa aad ogtahay inay badbaadsan yihiin mooyaane, maadaama faylasha laga soo dejiyo bogagga qolo saddexaad ay keeni karto in si lama filaan ah loo rakibo malware.
PHP soo dejiso bogga
Haddii aad soo dejisanayso mashiinka Windows, ka raadi isku xirka "Downloads" ee nooc kasta oo PHP ah oo hubi inaad ku rakibayso faylasha saxda ah.
Waxa kale oo aad ku rakibi kartaa noocyadii hore ee PHP, laakiin tan laguma talinayo ilaa aad taqaanid waxa aad samaynayso, maadaama ay u soo bandhigaan server-kaaga cayayaanka iyo cilladaha waaweyn ee amniga.
Haddii aad wado qaybinta Linux, inta badan uma baahnid inaad faylasha ka dhex hesho mareegaha, waana inaad isticmaashaa khadka taliska. Arrintaas si faahfaahsan ayaan hoos ugu gudbin doonnaa.
Nooca PHP ee Aan Isticmaalaa?
Haddii aad gujiso isku xirka kor ku xusan, waxaad u badan tahay inaad fiirisay dhammaan faylashaas oo aad dareemayso culeys. Waa kuwee nooca PHP ee saxda ah?
Guud ahaan, haddii aad bilaabayso mashruuc cusub oo arrimaha ku habboonaantu aanay dhibaato ahayn, waa inaad heshaa nooca ugu dambeeyay ee xasilloon ee PHP.
Mararka qaarkood waa suurtogal in la soo dejiyo noocyada beta ee PHP, kuwaas oo xitaa ka sii cusub, laakiin kuwan badanaa waa dhib badan yihiin oo kaliya ayaa la sii daayaa si ay uga caawiyaan horumariyayaashu inay ururiyaan jawaab celin. Inta badan, waa inaad ku dhegganaato sii-deynta xasilloon.
Ka warran noocyadii hore? Nooc kasta oo PHP ah ayaa la socda astaamo cusub, laakiin taasi waxay la macno tahay is-waafaqid la'aan cusub oo leh astaamo hore. Haddii aad u baahan tahay inaad sameyso shay gaar ah oo aan lagu taageerin noocii ugu dambeeyay ee PHP, waxaad isticmaali kartaa nooc duug ah, laakiin waa inaad ku dhegtaa kaliya noocyada hadda la taageero.
Haddii aadan hubin, isticmaal nooca ugu dambeeyay ee PHP.
Ogow in WordPress uu ku habboon yahay oo keliya noocyada qaarkood ee PHP. Waxay si farsamo ahaan u taageertaa noocyada PHP ee ka bilaabmaya 5.6.20+, laakiin kuwani aad bay da' u yihiin sidaas darteed laguma talinayo. Noocyada 7.2 ilaa 7.4 hadda waa noocyada ugu taageerada badan ee WordPress.
Nooca PHP 8 sidoo kale waa la jaan qaadaya, laakiin hadda, tani waa mid aad u cusub, oo dhammaan plugins-yadu si sax ah uma shaqeeyaan. Haddii aad ka welwelsan tahay arrimaha ku habboonaanta, ku dheji PHP nooca 7.4. Waxaad akhrin kartaa boostada bartilmaameedyada PHP si aad u aragto sida PHP CMS-yada kala duwan iyo qaab-dhismeedka ay u qabtaan noocyada PHP ee kala duwan.
Sida loogu rakibo PHP Linux Linux
Kahor intaadan bilaabin, waa inaad barataa Terminalka iyo sida loo shaqeeyo Unix-like OSes guud ahaan. Guud ahaan, koodhadhkan khadka talisku waa inay ku shaqeeyaan qaybinta Linux kasta oo adeegsata syntax-ka caadiga ah ee Terminal-ka, laakiin waxaan hoos uga tagnay qoraalo qaar OS-yo gaar ah.
Marka hore, waa inaad hubisaa in xidhmooyinkaagu ay cusub yihiin, markaa ku socodsii amarkan Terminalka.
Hadda waxaad diyaar u tahay inaad rakibto PHP. Amarka in sidaas la sameeyo waa mid aan dadaal lahayn oo toos ah.
Ku rakibida PHP iyada oo loo marayo terminal
Tani waxay ku rakibi doontaa noocii ugu dambeeyay ee PHP oo ay la socdaan dhowr kordhin. Waxaad isticmaali kartaa koodkan si aad u aragto nooca aad haysato.
Maxaa dhacaya haddii aad rabto inaad ku rakibto nooc gaar ah oo PHP ah, sida PHP 7.4? Waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho PPA, ama Kaydka Xidhmada Shakhsi ahaaneed, ee Ondřej Surý. Kani waa hab nabdoon oo lagu rakibo noocyadii hore ee la taageeray ee PHP. Samee saddexdan amar midba mar:
Hadda nidaamkaagu wuxuu aqoonsanayaa kaydka, oo waxaad ku rakibi kartaa PHP 7.4. Ku qor amarka soo socda:
Dabcan, waxaad ku beddeli kartaa lambarkan nooc kasta oo PHP ah oo aad rabto.
Taasi waxay dabooshaa aasaaska, laakiin haddii aad u baahan tahay caawimo dheeraad ah qaabeynta, dukumeentiga rakibaadda PHP ee Unix ayaa ku caawin kara.
Ku rakibida PHP ee Ubuntu
Isticmaalayaasha Ubuntu, ma jiraan walaacyo badan oo gaar ah ilaa aad raacdo hagaha sare. Ubuntu waa mid ka mid ah qaybinta ugu caansan, sidaa darteed hagaha Linux badankood si dhab ah ayaa loogu sameeyay nidaamkaas.
Mid ka mid ah ikhtiyaarka beddelka ah ee aad heli karto ayaa ah soo dejinta kaydka LAMP. LAMP waxay u taagan tahay Linux, Apache, MySQL, iyo PHP. Asal ahaan waa xidhmooyin ka mid ah dhammaan software-yada aad u baahan tahay si aad u hesho server-ka oo socda.
Markaad gacanta ku soo dejisan karto mid kasta oo ka mid ah qalabkan si gaar ah, waxaad heli kartaa Taskel, xidhmo kuwaas oo dhan ku rakibi doona hal mar. Kaliya u socodsii labadan amar si isku xigta Terminalka:
Ku rakibida xirmada LAMP oo leh Taskel iyada oo loo marayo terminal
Ku rakibida PHP ee CentOS 7
Nidaamkani waxa uu ka yara duwan yahay qaybinta kale ee Linux. On CentOS, amarrada ku habboon iyo apt-get ma ahan hababka ugu habboon ee lagu rakibo software-ka. Taa beddelkeeda, waxay isticmaashaa yum, Yellowdog Updater Modified, maamule xirmo ka wanaagsan nidaamyada hawlgalka ku salaysan ee RHEL.
Haddii kale, amarrada aad u baahan doonto inaad isticmaasho waa isku mid. Si aad u cusboonaysiiso xidhmooyinkaaga, socodsii amarkan beddelka:
Sida amarrada kale, sida caadiga ah waad bedeli kartaa apt-get yum leh. Si loo rakibo PHP, isticmaal amarkan.
Ma u baahan tahay martigelin-dhakhso leh, ammaan ah, iyo horumariye-saaxiibtinimo martigelin? Behmaster waxaa la dhisay iyadoo maskaxda lagu hayo horumariyeyaasha PHP waxayna siisaa qalab badan oo awood leh iyo dashboard dareen leh. Eeg qorshayaashayada!
PHP amarrada sida php –v waa in si la mid ah uga shaqeeyo CentOS 7, markaa uma baahnid inaad ka walwasho taas.
Ku rakibida PHP Debian
Waxa u dambeeya nidaamyada hawlgalka u eg Unix waa Debian. Markan waxaa jira walaac yar oo yar, laakiin badi amarada kor ku xusan waa inay si fiican u shaqeeyaan.
Debian, waxaad isticmaali kartaa midkood apt-get or aptitude amarradaada Terminalka The aptitude amarku waa wax yar oo dhammaystiran wuxuuna bixiyaa interface interface. Waxay ku xiran tahay doorashada shakhsi ahaaneed ee aad isticmaashid, oo midkoodna wuxuu heli doonaa shaqada.
Markaa halkii aad isticmaali lahayd kuwa caadiga ah apt-get amarka, waxaad samayn kartaa kan beddelka:
Debian waxay noqon kartaa mid khafiif ah. Haddii aad ogaato in PHP aanu kala saarin ama kordhintu aanay shaqaynayn, iska hubi inaad cusboonaysiisay faylka qaabaynta shabakadda ee seerfarkaaga iyo in ay ku shubayso kordhinta ini files.
Waxyaabo yaryar ka sokow, tilmaamaha Debian waxay la mid yihiin kuwa loogu talagalay qaybinta Linux kale.
Sida loogu rakibo PHP on Windows
Haddii aad isticmaalayso nidaamka Windows, si ka duwan macOS iyo Linux, uma baahnid inaad ku rakibto PHP iyada oo loo marayo khadka taliska (in kasta oo ay tahay ikhtiyaar haddii aad doorbidi lahayd).
Habka ugu fudud ee halkan loogu rakibo PHP waa in la awoodsiiyo IIS ka dibna la isticmaalo WebPI si loo rakibo PHP. Ka dib markii la bilaabay WebPI, waxaad ka heli kartaa hoosta Products tab. Guji Add nooca aad rabto, kadibna guji Ku rakib.
Awood u siinta IIS ee Windows
Waxaad sidoo kale kala soo bixi kartaa PHP ee Windows oo aad gacanta ugu habeyn kartaa si ay ula shaqeyso IIS. Hubi inaad hesho nooc aan xadhig-ammaan ahayn haddii aad isticmaalayso IIS.
Haddii waxaas oo dhami ay aad u adag yihiin, waxaad ku rakibi kartaa WampServer ama XAMPP, maadaama kuwani ay la socdaan wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u bilowdo la shaqaynta server-ka shabakadda: Apache, database, iyo dabcan PHP.
Tilmaamahani waxay la shaqayn doonaan inta badan Windows OS-yada casriga ah sida Windows 10, 7, iyo Vista. Haddii aad isticmaalayso noocii hore ee Windows, waa inaad hubisaa dokumentiga rakibaadda Windows ee dhaxalka u ahaa.
Daaqadaha waxaa laga yaabaa inay u baahdaan qaabeyn yar oo dheeri ah si ay PHP ugu shaqeyso si sax ah, markaa iska hubi inaad hubiso dukumeentiyada qaabeynta Windows ee lagu taliyay. Waa inaad wax yar ka dhigtaa ini tweaks.
Sida loo rakibo PHP on macOS
PHP wuxuu ku yimaadaa horay loogu sii rakibay inta badan nidaamyada macOS, marka inta badan uma baahnid wax rakibaadda gacanta ah.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad ka fikirto dhowr sadar oo kood ah faylka qaabeynta Apache httpd.conf, oo aad inta badan ka heli karto /private/etc/apache2/httpd.conf. Faallo ka bixi labadan sadar adiga oo ka saaraya astaanta hashtag:
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad sameyso qaabayn dheeri ah haddii aadan jeclayn qiyamka caadiga ah ee dejinta faylalka qaarkood. Haddii kale, hel DocumentRoot, ka dibna samee oo ku shub faylka PHP oo leh koodkan:
Waxaad had iyo jeer ku hubin kartaa nooca PHP-ga php –v amar si loo hubiyo in PHP si sax ah loo rakibay.
Haddii aad u baahan tahay inaad gacanta ku soo dejiso PHP, markaa waa inaad ku rakibtaa Homebrew oo adeegso amarkan fudud:
Dhammaan ku saabsan Kordhinta PHP
Marka aad kor u qaaddo PHP oo aad shaqeyso, waa fikrad wanaagsan inaad ka fikirto kordhinta. Maktabadahan la soo ururiyey waxay ku daraan dhammaan noocyada kala duwan ee waxtarka leh ee dheeraadka ah. Ka fakar iyaga inay yihiin plugins kuwaas oo ku dara waxa PHP ay horay u bixisay. Qaar ka mid ah kuwan ayaa looga baahan yahay inay socodsiiyaan qaab-dhismeedka PHP, sida Laravel iyo Symfony.
In kasta oo ay suurtogal tahay in aad wax kasta ku qorto adiga oo aan waligaa taaban kordhinta, ma jirto sabab aad keligaa u samayn karto marka ay jiraan jid-gaaban oo si weyn loo isticmaalo si noloshaada loo fududeeyo.
PHP waxay horey ula timid daraasiin dheeri ah oo ku dhex jira, kuwaas oo qaarkood ay tahay inaad gacanta ku qabato, qaarna waxaad isla markiiba bilaabi kartaa isticmaalka. Waxa kale oo aad ku rakibi kartaa kordhinta PHP iyada oo loo marayo boggaga sida PECL, kaas oo martigeliya boqolaal xirmo oo dhinac saddexaad ah.
Buug-gacmeedka PHP wuxuu bixiyaa dukumeenti kordhinta qaar badan oo kuwan ka mid ah sidoo kale, si aad u heli karto joogsiga isticmaalka iyaga.
Ma hubtid meesha laga bilaabo? Halkan waxaa ah dhawr muggeed oo ka mid ah kordhinta PHP ee caanka ah:
Apache: Apache waa kombuyuutar shabakadeed si weyn loo isticmaalo oo ay ku taliso WordPress sababtoo ah waafaqid weyn oo ay la leedahay isaga iyo PHP. Apache waxay la socotaa PHP, markaa uma baahnid inaad gacanta ku rakibto.
NET: NET waa qaab-dhismeedka software caan ah oo aad isticmaali karto si aad u dhisto codsiyada webka iyo in ka badan. Waxay ku shaqeysaa luqado badan, oo ay ku jiraan PHP. Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiisaynayso PeachPie, kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku socodsiiso code PHP gudaha NET.
MySQLi: Nooca ugu wanaagsan ee kordhintii hore ee MySQL, MySQLi waxay awood kuu siineysaa inaad la shaqeyso MySQL software database. Midkani waa mid loo baahan yahay si uu kaaga caawiyo dejinta xogtaada.
Mar kasta oo aad rakibto kordhinta, waxaad u baahan tahay inaad ka furto. Kaliya fur php.ini oo ka saar badhanka (;) hortiisa extension=extensionname.
Waa inaad sidoo kale hubisaa qaababkan PHP haddii aad jeclaan lahayd inaad habayso koodhkaaga oo aad ku dhisto maktabad horay loo diyaariyey. Waa hab fiican oo lagu bilaabo horumarinta codsiyada webka ee PHP.
Nidaam kasta oo qalliin oo aad isticmaalayso, ku rakibida PHP ma aha habka adag. Haddii aad rabto inaad sameyso server-ka tijaabada WordPress, waxaad u baahan doontaa. Barnaamijyada PHP ee raba waxay u heli doonaan dejinta server-ka shabakadda iyo ku rakibida PHP-da jimicsi weyn.
Hubi inaad soo dejiso PHP iyada oo loo marayo khadka taliska ama goobta rasmiga ah. Waxaad heli kartaa noocii ugu dambeeyay ee xasiloon ee PHP ama nooc kasta oo kale oo ku habboon WordPress.
Oo haddii aad jeclaan lahayd inaad bilowdo horumarinta boggaga WordPress isla markaaba, waxaad isku dayi kartaa DevBehmaster! Waxay la socotaa PHP oo horay loo rakibay. Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad isweydaarsato kuleyl u dhexeeya noocyada PHP ee kala duwan si aad u tijaabiso goobtaada goobo server oo kala duwan.
Mawduucyada WordPress ee ugu Fiican ee Dhakhaatiirta Ilkaha & Rugaha Caafimaadka Ilkaha 2021